Masaaridii hore ee xabsiyada, maxaabiista waxaa loogu yeeri jiray "skr-cnh" taasoo macnaheedu yahay "maxbuus" - Afrikhepri Fondation
Masaaridii hore, maxaabiista waxaa loogu yeeri jiray "skr-cnh" oo macnaheedu yahay "maxaabiis"
Pär codjovi Djata
Akhrinta: 4 daqiiqo
En Masar hore, maxaabiista waxaa loogu yeeri jiray "skr-cnh" oo macnaheedu yahay "maxaabiis". Waxay ahayd isku mid markii laga wada hadlayo, maxbuusku wuxuu ahaa maxbuus xuquuq leh oo ku naaloonaya xorriyad cayiman, ma ahayn addoon, shey, iyo wax uu qofku ku weerari karo dhammaan noocyada. xadgudubka. Sidaa darteed erayga addoon kama helo asalkiisa Afrika, laakiin Yurub, halkaas oo ixtiraamka bina-aadamku ay aad uga fog tahay inuu waafaqsan yahay fikirka ruuxi ahaaneed ee Afrikaanka.
Intaas waxaa sii dheer, sida uu sheegayo badmareenka Talyaanigu Ca Da Mosto, waxay qabteen addoomo, way baabtiisteen, waxay barteen Boortaqiis, waxay u bixiyeen magacyo reer Yurub ah, ka dibna waxay dib ugu celiyeen Afrika si ay u soo qabtaan una iibiyaan addoomo kale; ku dar koox tiro badan oo dambiilayaal ah, gacan ku dhiiglayaal, guuto Burtuqiis ah midna wuxuu helay nidaam duullaan ah oo socday in ka badan 400 sano.
Aynu dhawr daqiiqadood ku qaadanno macnaha dhabta; waxaad tahay Afrikaan ku sugan dhulalkaaga oo ku hubaysan qaanso, waran iyo gaashaan waxaana kuu imanaya niman cadaw ah oo cadaw ku ah oo ku hubaysan qoryo, madfac, oo hadaf keliya leh, si ay u qabtaan inta ugu badan madow (dahabka madow ee waqtiga) si kasta oo ay macquul u tahay. Waxaan xasuusineynaa in aasaaska ganacsigu yahay isdhaafsiga badeecadaha ama geedi socodka. Halkee baa ganacsigu ku yaal halkan? Aynu noqono mid cadaalad ah oo caqli badan marka la eego milicsiga, madaxdan ma aysan dooran inay wax iibiyaan, laakiin waxaa ku waajibayay inay sidaas sameeyaan, haddii kale maxay u sameyn waayeen kahor duullaankii dalkooda ay ku qaadeen cadaanka.
Qaar ka mid ah waxyaabihii laga soo qaatay buugga Mr Bwemba-Bong "Markii Afrikaanku ahaa Dahabkii Madoobaa ee Yurub, daabacaadyadii MENAIBUC".
King Alfonso I (NzingaMbemba) oo ah boqorka Kongo: "maalin kasta, baayacmushtariyaashu waxay qafaashaan dadkayaga, carruurta dalkan, wiilasha amiirradeena iyo kuwa sharafta leh, dadka ehelkeenna (...) si looga fogaado xadgudubkan, waxaan leenahay Waxaan ubaahanahay boqortooyadan kaliya wadaaddada iyo dad yar oo wax ka dhiga iskuulada (…) waxaan rabnaa inaan boqortooyadan noqon meel laga ganacsado ama loo maro addoomada
King Tezifon of Allada "waxaad dhisi doontaa guri oo aad marka hore dhigayso laba qaybood oo madfac yar yar ah, sanadka ku xigana waxaad fuuli doontaa afar, muddo yar gudahoodna wershadaadu waxay isu beddeli doontaa qalcad adiga oo ah sayidka dowlad goboleedyadayda oo kaa dhigaya mid awood u leh inaad sharciyo igu soo rogto ”.
Almany, boqorka muslimiinta iyo dhamaan maamulayaasha wadankiisa ... waxaan kaaga digeynaa in dhamaan kuwa noogu yimaadda ganacsiga la dili doono lana xasuuqi doono hadii aadan caruurteena dib noogu soo celin ... gabi ahaanba ma dooneyno inaad iibsato muslimiin ama dhow ama fog "
Shucuubta Afrikaanka ahi waligood way iska caabiyeen ka ganacsiga addoonsiga. Dagaalkii ay kula jireen ganacsatadii addoonsiga ahayd ayaa horseeday burburintii boqortooyooyinkii Afrika oo dhan, kuwaas oo aan iska caabin karin kuwa ka soo duulay ee hubaysnaa. Waxay raacday aasaaskii madaxa boqortooyooyinka, dalalkii addoonsiga, ee boqoro-toobiyeyaasha Afrika ama caddaan wata magacyo Afrikaan ah oo loo tixgelin doono waqtigeenna inay yihiin Afrikaan iibinaya saaxiibadood iyagoo ku qanacsan.
“Waxay muujineysaa in la arko in su’aasha khiyaanada waddaniyadeed, ee khuseysa aadanaha oo dhan, ay dhibaato iyo dambi ku noqoneyso Afrikaanka xilligii addoonsiga. Tani wax bay qarinaysaa. Reer Yurub waxay si baaxad leh u qabteen oo u iibiyeen asxaabtooda Carabta muddo qarniyo ah si ay uga macaashaan ka ganacsiga addoonsiga ee waqtigaas. Faransiiska ayaa si weyn uga iibiyay Jarmalka intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Xitaa waxay ka iibiyeen Yuhuudda kumanaan kun iyadoo lala kaashanayo mas'uuliyiinta ugu sareysa Dowladda… kiiska Faransiiska, waxaan horkeennay Jean Moulin iska caabinta iyo kiisaska Afrika, waxaan noqonay amnesiac. Qaar ka mid ah Hindida ayaa indha indheeyayaal ka ahaa ciidamadii Mareykanka xilligii ay qabsanayeen galbeedka, Shiinaha oo dowladda ku xirnaa xilliyadii gumeystaha ayaa taageersanaa Anglo-Saxon, laakiin kaliya Afrikaanka ayaa maxkamad la soo taagayaa iyagoo leh iibiyay walaalahood. Aragtida aadka u weyn ee walaalaha waxay kaliya qaadatay macnaheeda dhabta ah ka dib gumaysi kaas oo ku burburiyey dhammaan dadka Afrikaanka isku qaab. Markii hore, waxay ahaayeen dadyow midoobay ama aan ahayn xulafooyin, hoos-u-deggen ama aan ahayn. Taariikhyahanada reer galbeedku waxay u dhawaadaan taariikhda gumeysiga kahor iyagoo ku dhawaaqaya qiimo kasta oo ay ku sheegaan in boqorrada Afrika, oo ku lug leh dagaallo gudaha ah oo aan qiil lahayn, ugu dambeyntii ay naftooda la heleen tiro aad u tiro badan oo addoomo ah oo ay ahayd in lagu iibiyo qiime kasta. Tani waa karti darro iyo daacad darro aqooneed. ”[Wpdiscuz-feedback id =” 7067auunqj ”question =” Maxaad u malaynaysaa? »Furmay =» 1 ″] [/ wpdiscuz-feedback]
Waxaa qoray kamit Serge Bonza
Markuu Afrikaanku ahaa dahabka madow ee Yurub
KA BAXAY SHAQADA
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Julay 28, 2021 12:44
Sixirka Cosmos - Documentary (2012)